Qaar ka mid ah dhallinyarada Magaalada Muqdisho oo siyaabo kala duwan uga hadlay kulanka galabta ee Horseed iyo Elman – Gool FM
Dajiye February 6, 2020
(Muqdisho) 06 Feb 2020. Kulan ka tirsan horyaalka Somali Premier League ayaa galabta lagu wada inuu ka dhaco garoonka Eng Yariisow Stadium ee dhaca degmada Cabdicasiis ee Gobolka Banadir, kaasoo dhex mari doono kooxaha Horseed iyo Elman.
kulankan ayaa ah mid aad u xiiso badan madaama ay labadan kooxood ay u oomanyihiin iney ku guuleystan horyaalka Somali Premier League oo mudo ugu dambeysay labada dhinac, balse sanadkan ayee rajo ka qaban iney hantan horyaalka.
Labadan kooxod Horseed iyo Elman ayaa waxey dheeli doonan ciyaar isla xisaabtan ah maadama ay isku dhibco dhawyihiin labadan dhinac, wuxuu kulankan noqon doonaa mid xiisihiisa wata.
Kooxda Elman ayaa horyaalka iney ku guuleysato waxaa ugu dambeysay sanadkii 2012-kii markaas oo lagu ciyaari jiray bacaadka garoonka Jaamacadaha, waxeyna rabtaa iney dib u soo nooleyso awoodii ay ku laheyd ku guuleysiga horyaalka dalka.
Wiilasha Cawo iyo maalin ayaa horyaalka iney ku guuleystan waxaa ugu dambeysay sanadkii 1980-kii wixii xiligaas ka dambeyay xalaado kala duwan ayey soo martay kooxdan, balse ifafaalada sanadkan ayaa ah mid aad u bidhaameysa oo muujineysa iney hanan karto horyaalka.
Haddaba dhanka hoose ka daawo aragtida ay ka dhiigbteen qaar ka mid ah dhalinyada Magaalada Muqdsho Kulanka adag kooxaha Horseed iyo Elman ee galabta ku dhex mari doono Eng Yariisow Stadium.
RASMI: Garoonka lagu ciyaari doono Kulanka Final-ka Copa del Rey oo la shaaciyey